Breaking News : कोरोनाको लक्षण देखिएर आइसोलेसनमा रहेकी सुत्केरीको मृत्यु Rest in Peace – Sandesh Munch
May 16, 2020 601
काठमाडौं। काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ।
कोरोनाको पनि उपचार हुने गरी तोकिएको धुलिखेल अस्पतालमा उनको बिहीबार राति मृत्यु भएको अस्पतालका फोकल पर्सन नरेन्द्र झाले पुष्टि गरे।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका-९ घर भएकी २९ वर्षीया उनको मृत्युको कारण भने खुलेको छैन। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नौ दिनअघि सुत्केरी भएकी उनलाई अस्पतालबाट घर फर्केपछि श्‍वासप्रश्‍वासमा समस्या भएको भन्दै धुलिखेल अस्पताल ल्याइएको थियो।
उनको अस्पतालमा मृत्यु भएको धुलिखेल अस्पतालका डा. रमेश मकाजु श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरे।
“हामीले मृत्यु भएकी महिलाको कोराना परीक्षण पनि गरिरहेका छौंं,” उनले भने, “दिउँसोसम्म रिपोर्ट आएपछि मात्रै मृत्युको कारण यकिन गर्न सकिन्छ।”
स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकी सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षकी महिलाको बिहीबार राति मृत्यु भएको थियो ।
काभ्रेका जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र झाले महिलाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको बताए ।(फोटो : फाइल)
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार काठमान्डौ , नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट १ जनाको ज्यान गएको छ । यो नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गएको पहिलो घ’टना हो ।सिन्धुपाल्चोकको बाह्राविसेबाट बिहीबार धुलिखेल अस्पतालमा भ’र्ना भएकी २९ वर्षीया महिलाको शुक्रबार साँझ उपचारका क्रममा को’रोनाको संक्रमणबाट नि’धन भएको हो। श्वास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षण देखिएपछि उनको स्वा’ब नि’कालेर पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। अस्पतालमै आरडिटी र पि’सिआर परीक्षण गर्दा उनको स्वा’ब परीक्षणको नजिता पोजेटिभ आएको थियो।
मृ’त्युपछि स्वा’बको पुनः जाँ’चका लागि टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि पोजेटिभ नजिता देखिएको हो ।उनी आठ दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डे’लिभरी गराएर घर फर्किएकी थिइन्। नि’धन भएकी महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अहिले धुलिखेल अस्पताल सि’ल गरिएको छ। अहिले आ’कस्मिक क’क्षका चिकित्सक, नर्स सबैको स्वा’ब क’लेक्सन गरेर कोरोना परीक्षणको लागि पठाइएको छ। त्यसका साथै ति बि’रामीको उपचारमा सहभागी सबै चिकित्सकलाई पनि अस्पतालमा छुट्टै राखेर स्वा’ब परीक्षण गरिएको छ।
Prevदुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता!
Nextहोसियार हुनुहोस् : सुतेको ठाउँमै मरिएला!
ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी राशिहरु बीचको प्रेम र विवाह कहिल्यै हुँदैन सफल